Saalax Khaashuqji oo Difaacay Boqortooyada Sacuudiga | Gabiley News Online
Wiilka suxufiga reer Sacuudi ee la dilay ee Jamal Khaashuqji, kaasi oo beeniyey inuu heshiis lacageed la gaadhay dowladda, ayaa maanta aad u difaacay boqortooyada, ka hor sanad guuradii koowaad ee dilka.
Khaashuqji oo ahaa xog-ogaal ku dhex-jiray qoyska boqortooyada balse kadib isu-beddelay dhalleeceeye ayaa 2-dii October 2018 lagu dhex-dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, howl-gal ay fuliyeen 15 sarkaal oo laga soo diray Riyadh. Meydkiisa illaa iyo hadda lama helin.
11 ka mid ah dadkaasi oo la aqoonsaday ayaa maxkamad ku wajahaya Riyadh, iyada oo shan ka mid ah ay wajahayaan ciqaab dil ah.
“Sanad ayaa kasoo wareegtay geeridii aabahay aan jeclaa. Muddadan, mucaaradka iyo cadowga Bariga iyo Galbeedka waxay isku dayeen inay ka faa’iideystaan kiiska…si ay u waxyeeleeyaan dalkeyga iyo hoggaanka” ayuu ku yidhi tweet.
“Ma aqbali doono in xusuustiisa iyo kiiska laga faa’iideysto” ayuu yidhi Saalax oo deggan Sacuudiga.
“Aad ayaan ugu kalsoonahay hannaanka cadaaladda boqortooyada iyo awoodda ay u leedahay inay cadaaladda mariso kuwii fuliyey dambigan aadka u xun” ayuu yidhi.
CIA-da iyo ergeyga gaarka ah ee Qaramada Midoobey ayaa labaduba si toos ah dilka ula xidhiidhiyey dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan, eedeyntaas oo uu beeniyey